Isitudiyo esihle ku-attic eneshawa nekhishi lakho - I-Airbnb
Isitudiyo esihle ku-attic eneshawa nekhishi lakho
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Austin
Indawo yethu yokuhlala iseduze neMönchengladbach edolobheni lase-Erkelenz. I-Düsseldorf, i-Aachen, i-Cologne kanye ne-Roermond (NL) nayo ingafinyelelwa kalula kakhulu, futhi ukuxhumeka komgwaqo kuhle kakhulu. Isiteshi sesitimela esikhulu e-Erkelenz kulula ukusifinyelela.
Singakunikeza ukulethwa kwamahhala nokuqoqwa esiteshini sesitimela e-Erkelenz. Ukuletha nokulanda esikhumulweni sezindiza sase-Düsseldorf nanoma iyiphi enye indawo oyifunayo kungenzeka ngezindleko ezengeziwe.
Wena/unegumbi elihlanzeke kakhulu elihlanganisa nekhishi lakho kanye neshawa/indlu yangasese ku-attic (isitezi sesibili) sendlu yomndeni owodwa, isamba esingamamitha-skwele angama-70. Indawo yokuhlala neyokulala inkulu impela futhi inombhede (140x200cm). Uma kunezivakashi ezingaphezu kwezimbili, kunemibhede yosofa emibili eyengeziwe (engagoqwa ibe yimibhede eyodwa) kuze kufike izihambeli ezi-2 ezengeziwe.
Ikhishi lifakwe ikhishi elifakiwe. Umshini wokuwasha izitsha nomshini wokuwasha kuyatholakala ekhishini.
I-TV yesikrini esiyisicaba se-HD egcwele kanye ne-WiFi yesivakashi samahhala kuyatholakala.
Indawo yokuhlala ilungele imibhangqwana, imindeni (enezingane), izihambi ezizimele, nabahambi bebhizinisi.
umbhede oyidabulu engu- 1, 1 umbhede wosofa, 1 usofa, Omatolasi abangu-1, 1 umbhede wosana, Umbhede wengane e-1
4.88 · 119 okushiwo abanye
Indawo yethu yokuhlala iseduze neMönchengladbach edolobheni lase-Erkelenz. I-Düsseldorf, i-Aachen, i-Cologne kanye ne-Roermond (NL) nayo ingafinyelelwa kalula kakhulu, futhi ukuxhumeka komgwaqo kuhle kakhulu. Isiteshi sesitimela esikhulu e-Erkelenz kulula ukusifinyelela. Izitolo (Netto kanye ne-Edeka) ziqhele ngamamitha angama-500.
Impahla itholakala endaweni enhle kakhulu futhi ethulile (izindawo zokuhlala ezihlanzekile)
Angihlali ngisekhaya, kodwa ngingatholwa ngocingo, i-what's app, Umlayezo we-Airbnb.